November 25, 2020 - Online Hartha
မကျြစိ ကနျြးမာရေး အတှကျ အထူးသတိထားသငျ့တဲ့ လက်ခဏာ လေးမြား
November 25, 2020 by Online Hartha
မျက်စိ ကျန်းမာရေး အတွက် သတိထားသင့်တဲ့ လက္ခဏာ လေးများ မျက်စိ ဆိုတာ ကျွန်တော် တို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ် အစိတ်အပိုင်း တွေထဲမှာ အနူးညံ့ဆုံးနဲ့ အထိခိုက်အလွယ်ဆုံး အစိတ်အပိုင်း ဖြစ်ပါတယ်။ အမြင်အာရုံ ဟာ ကျွန်တော်တို့အတွက် အရေးပါတဲ့ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုပါပဲ။ မျက်စိမမြင်ရရင် (သို့) အမြင်အာရုံ အားနည်းပြီဆိုရင် ဒုက္ခိတ တစ်ပိုင်းလို ဖြစ်သွားတတ်တော့ မျက်စိ ကျန်းမာရေး ဟာ ကျွန်တော်တို့အတွက် အလွန်အရေးပါတဲ့ အရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ပြီး မျက်စိ ဆိုတာ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ် အစိတ်အပိုင်း တွေထဲမှာ အနူးညံ့ဆုံးနဲ့ အထိခိုက်အလွယ်ဆုံး အစိတ်အပိုင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီတော့ မျက်စိပတ်ဝန်းကျင်မှာ အောက်ဖော်ပြပါ လက္ခဏာ လေးတွေ ပြနေပြီဆိုရင် လိုအပ်တဲ့ ဆေးဝါး ကုသမှု နဲ့ လုပ်ဆောင်မှုလေးတွေကို … Read more
ယခုလအတွက် တနင်္လာ သားသမီးများ၏ မုဆိုး ရွှေအိုးရကိန်း အချိန် ကံကောင်းစေရန် ထီဂဏန်းများ
နိုဝင်ဘာလ အတွက် တနင်္လာသားသမီးများ၏ ကံကောင်းစေရန် ထီဂဏန်းများ တနင်္လာသားသမီးများ အနေဖြင့် နိုဝင်ဘာလမှာတော့ ထီကံကောင်းတဲ့လဖြစ်နေပါတယ်။ ထီထိုးမယ်ဆိုရင် တစ်ယောက်တည်း ထိုးပါ။စပ်တူမထိုးပါနှင့်။ ဒီလအတွက် အကျိုးပေးတဲ့ဂဏန်းအနေနဲ့ကတော့ ၅ အစ ၃ အလယ် ၁ အဆုံးကိုထိုးပေးပါ။ အက္ခရာ အနေနှင့် ပ၊ဖ၊ဗ၊ဘ၊မ၊အ၊ဥတို့ဖြစ်ပါတယ်။ ထိုးရမည့်နေ့ကတော့ ကြသပတေးနေ့ဖြစ်ပါတယ်။ ထိုနေ့အတွက် တနင်္လာသားသမီးများရဲ့အကျိုးပေးတဲ့ အချိန်ဖြစ်တဲ့ မုဆိုးရွှေအိုးရကိန်းအချိန်မှာ မနက် ၈:၂၅ မှ ၁၀:၄၈ မိနစ်အကြား မှာထီထိုးပေးပါ။ ကံကောင်းပါလိမ့်မည်။ ထီဆိုင်ရဲ့ အနောက်အရပ်ကို မျက်နှာမူပြီး ထီထိုးပါ။ ထီထိုးပြီးလျှင် ဘုန်းကြီးကျောင်းကို မုန့်(၅)မျိုး၊ အိမ်ဘုရားမှာပန်း(၅)မျိုး အားဘုရားလှူပြီး ထီပေါက်ပါစေလို့ဆုတောင်းခိုင်းပါ။ ဒီလအတွက် တနင်္လာသားသမီးတိုင်း ကံကောင်းပါစေဟု ကျွန်ုပ်မှ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။ #1875 Bay Din Unicode … Read more
အချစ်ဆိုတာ ကိုယ်ခန္ဓာရဲ့ အနွေးဓာတ်လေးတစ်ခု (ဖတ်ဖြစ်အောင် ဖတ်ကြည့်ပါ ရင်ထဲသို့ ထိပါလိမ့်မယ်…)
ဖတ်ဖြစ်အောင် ဖတ် ကြည့်ပါ….ရင်ထဲသို့ထိပါလိမ့်မယ်…. (၁) သူမ.. အပြင်မှာ နောက်ယောက်ျားလေးအသစ်တစ်ယောက် တွေ့နေတာကြောင့် အိမ်ကယောကျာ်းနဲ့ တစ်ကုတင်တည်းမအိပ်ချင်တော့ဘူး။ဘီဒိုထဲက စောင်နဲ့ ခေါင်းအုံးအသစ်ထပ်ထုတ်ပြီး ယောကျာ်းနဲ့ကုတင်ခွဲအိပ်တယ်။ တစ်ယောက်တည်း ကုတင်အထက်မှာ ချမ်းလွန်းလို့ တုန်နေတယ်။ယောက်ျားက ချက်ချင်းကုတင်နားလာပြီး သူ့စောင်နဲ့ လဲလိုက်တယ်..ပြီးတော့ ပြောတယ်.. “ ငတုံးမလေး… အရင်နေ့တွေက ငါနင့်ထက်အရင်စောပြီး အိပ်ရာဝင်တာ ငါ့ကိုယ်ငွေ့နဲ့ အရင်နွေးပေးအောင်လုပ်တာ.. စိတ်ချပါ.. ငါနင့်စောင် မဖယ်ပါဘူး.. ” သူမ စိတ် အရည်ပျော်သွားသည်။နောက်နေ့ အပြင်က ချစ်သူနဲ့တွေ့တဲ့အခါသူမက မေးလိုက်သည်။“ရှင် ကျမကို ချစ်လား” ? “ အမ်… အင်း… အင်း ချစ်တယ်လေ.. ”ရုတ်တရတ်အမေးကြောင့် သူနည်းနည်းကြောင်သွားသည်။“ဒါဆို ကျမစောင်ကို ရှင်နွေးထွေးအောင်လုပ်ပေးမှာလား” သူ ဒီ့ထက်ပိုကြောင်သွားတယ် .. “ ဘယ်လို… … Read more
အတိုကျခိုကျကငျးစေ အညံ့ရှငျးစမေညျ့ နညျးလမျးကောငျး(၃)မြိုးကို ဒါနပွု မြှဝပေေးလိုကျပါတယျ
အတိုက်ကင်းစေ အညံ့ ရှင်းစေ… ၁။မိမိနေ့စဉ် ရေချိုးသည့် ရေ၊ရေပုံး၊ရေကန်များထဲတွင် ပရုပ်ပြား ၂ပြား၊၃ပြားခန့် ထည့်ထားရပါမည်။ ထိုရေ နှင့်ရေချိုးသန့်စင်နေသရွေ့ မိမိထံကျရောက်နေသော အံ့မိခြင်းဒုက္ခမှပျောက်ကင်းခြင်း၊အတိုက်အခိုက် အညံ့အပ …. အနှောင့်အယှက်အလုံးစုံတို့မှ ကင်းလွှတ်ငြိမ်းစေပါတယ်။ကျန်းမာရေးလည်းအလွန် ကောင်းမွန်စေပါတယ်။ ၂။အိမ်သာ၊ရေချိုးခန်း တွေထဲမှာ ပရုပ်ပြားထားရပါတယ်။ထိုပရုပ်ပြားများ အငွေ့ပျံလာလေလေ မိမိအိမ်အတွင်းမှ…. မကောင်းသော အတိုက် များ ရှင်းလင်း ယူသွားလေလေပါ။မကောင်းခြင်းများစုပ်ယူပြီး အငွေ့ပျံထုတ်လိုက်တာပါ။ ၃။ပရုပ်ပြား(၅)ပြားခန့်ကိုခွက်အသေးထဲတွင် ထည့်ထားပြီး မိမိအိမ်ယာခေါင်းရင်းထက်တစ်နေရာတွင်တင်ထားလိုက်ပါ…. မိမိရင်ဆိုင်ရမည့် ရန်အသွယ်သွယ် အညံ့များ အတိုက်များကင်းဝေးစေပါတယ်။အရေပြားရောဂါ၊ အာရုံကြောရောဂါ၊ လေထိုးလေအောင့် ရောဂါဝေဒနာများ မခံစားရပါခင်ဗျ။ ၇ရက်သားသမီး မိတ်ဆွေ ထမင်းရှင် ကျေးဇူးရှင်များကအတိုက်အခိုက်အနှောင့်အယှက်များစွာ ကို အမြဲလိုလိုရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းနေရခြင်း​များကြောင့် …. သောကရောက် စိတ်ပျက်နေရသူများအတွက် ရည်ရွယ်၍ ကျွန်တော့်ဆရာ ဆရာဦးမင်းနိုင် သင်ကြားပေးသည့် အင်မတန်တန်ဖိုးရှိသောပညာရပ်ထဲမှ …. … Read more
၁။ သင့်အဆုတ်ကို တကယ်ဂရုစိုက်တယ်ဆိုရင် ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းကို ရှောင်ပါ။ ၂။ သင့်ဓမ္မတာလာတဲ့အခါ တကယ်ဂရုစိုက်တယ်ဆိုရင် ပဲစိမ်း စားပေးပါ။ (green beans to stop the period) ရပ်ချင်ရင်စားတာပါ။ ၃။ သင့်ဆီးလမ်းကြောင်းကို တကယ်ဂရုစိုက်တယ်ဆိုရင် ကြက်သွန်နီကို အစိမ်းစားသုံးပေးပါ။ ၄။ သင့်ကျောက်ကပ်ကို တကယ်ဂရုစိုက်တယ်ဆိုရင် နေ့ခင်းဘက်မှာ ရေများများသောက်ပြီး၊ ညဘက်မှာ ရေလျှော့သောက်ပါ။ ၅။ သင့်နှာခေါင်းကို တကယ်ဂရုစိုက်တယ်ဆိုရင် ပူစီနံရွက်ကို ပုံမှန်စားသုံးပေးပါ။ ၆။ သင့် ကျောက်ကပ်ကို တကယ်ဂရုစိုက်တယ်ဆိုရင် ညအိပ်ရာမဝင်ခင် အပေါ့စွန့်ပါ။ ၇။ သင့်အသည်းကို တကယ်ဂရုစိုက်တယ်ဆိုရင် အဝလွန်စေမယ့်အစာတွေ စားသုံးခြင်းကို ရှောင်ပါ။ ၈။ သင့်ခံတွင်းကို တကယ်ဂရုစိုက်တယ်ဆိုရင် နှမ်းဆီနဲ့ ပုံမှန်ပလုတ်ကျင်းပါ။ ၉။ သင့်လည်ချောင်းကို တကယ်ဂရုစိုက်တယ်ဆိုရင် ငရုတ်ကောင်းကို … Read more
(၄)ခါအသုံးပြုရုံနဲ့ ဆံပင်ကျွတ်ရပ်၊ ဆံပင်မဲနက်သန်စွမ်းစေပြီး မျက်ခုံးမွှေးလေးတွေပါ ပေါက်လာစေသောနည်း
(၄)ခါအသုံးပြုရုံနဲ့ ဆံပင်ကျွတ်ရပ်၊ ဆံပင်မဲနက်သန်စွမ်းစေပြီး မျက်ခုံးမွှေးလေးတွေပါ ပေါက်လာစေသောနည်း . (၂)ပါတ်အတွင်း ၉၅% ဆံပင်ကျွတ်သက်သာ၊ ဆံပင်မဲနက် သန်စွမ်းစေပြီး မျက်ခုံးမွှေးလေးတွေပါ ပေါက်လာစေတဲ့ သဘာဝနည်းလေး ဒီနည်းလေးက ယုမွန်ကိုယ်တိုင်စမ်းသပ်ထားပြီး တကယ်ထူးခြားလို့ တင်ပေးဖြစ်တာပါ။ (၄)ခေါက်လောက် အသုံးပြုရုံနဲ့ ဆံပင် ၉၅%အကျွတ်သက်သာ မဲနက်သန်စွမ်းစေပါတယ်။ ယုမွန်အရင်က ဆံပင်တွေ ကျွတ်တာ ထိပ်ပါပြောင်တဲ့ အထိပါ။ ဆေးနည်းပေါင်းစုံ ကုခဲ့ပေမဲ့ အဆင်မပြေခဲ့ပါဘူး။ ထိပ်ပါပြောင်ပြီး ဆံပင်တအားကျွတ်လို့ အစခံရတဲ့အထိပါ။ ခုဒီနည်းလေးကို စမ်းသပ်တာ ၄ခါမြောက်မှာတင် ခေါင်းလျှော်ရင် ဆံပင် ၁၀၀ ကျော်ကျွတ်တဲ့သူက ၅ပင်လောက်ပဲ ကျွတ်တော့ပါတယ်။ အစက တော်တော်ကို အံ့ဩခဲ့တာပါ။ အဲ့လိုရလဒ်ရလာလိမ့်မယ်လို့တောင် ထင်မထားပါဘူး။ ပြီးတော့ မျက်ခုံးကိုပါ လိမ်းတာ၊ မျက်ခုံးမွှေးတွေပါ ပေါက်လာပြီး ထူထဲလာပါတယ်။ ရေရှည်စွဲလုပ်ရင် … Read more
တောက ရမျးကု ဒေါကျတာနဲ့ မွို့က ပညာစမျးတဲ့ မမ တှကွေ့လသေောအခါ…
တောက ရမ်းကု ဒေါက်တာနဲ့ မြို့က ပညာစမ်းတဲ့ မမတွေ့ကြလေသောအခါ… နယ်မြို့သေးသေးလေးတွေမှာ… ရမ်းကုတွေခေတ်ကောင်းစဉ်ကပေါ့ ….ရမ်းကုတစ်ယောက်ကတော့ တော်တော်နာမည်ကြီးတယ် … ကြီးရတဲ့အကြောင်းရင်းကလည်း ဘာရောဂါပဲဖြစ်ဖြစ် သူပေးတဲ့ဆေးကတော့.. ဘာမီတွန်ပဲ….. အာ့ကြောင့် နာမည်အရင်းတောင်ပျောက်ပြီး အားလုံးသိကြတာကတော့ သူ့နာမည် ဒေါက်တာဘာမီတွန်….. တနေ့တော့ .. မြို့ကြီးကနေ အလည်ရောက်လာတဲ့ မတ်မတ်တယောက်က ဒေါက်တာဘာမီတွန်ကို ပညာစမ်းချင်လို့ သူ့သမီးလေးကိုခေါ်သွားပြီး….. ” ဆရာ ကျွန်မသမီးလေးဖျားချင်သလိုလိုဖြစ်နေလို့ပါ ” ဆိုတော့… ပေးလိုက်တဲ့ဆေးက ဘာမီတွန်ပဲ …..အာ့နဲ့ နောက်ရက်မှာတခါထပ်သွားတယ်” ဆရာ ကျွန်မနူံးညောင်းပြီး ခေါင်းမကြည်သလိုဖြစ်နေလို့ပါ ” ဆိုတော့ ပေးလိုက်တဲ့ဆေးက ဘာမီတွန်ပဲ ….. မတ်မတ်လည်း သိပ်တော့မကျေနပ်သေးဘူး ….ဒီရမ်းကု ဘာမီတွန်ဆေးပေးလို့မရအောင် ဘာရောဂါလို့ပြောရမလဲ အသည်းသန်စဉ်းစားနေရတာ နှစ်ရက်သုံးရက်လောက်ကြာသွားတယ်…. အဲ ! စဉ်းစားလို့ရပြီဆိုတဲ့နေ့ကျတော့… … Read more
အပြိုလေးတှဖွေဈရကျနဲ့ အိမျထောငျသညျ ယောကငြ်ျားကိုမှ စှဲလနျးကွရတဲ့ အကွောငျးအရငျး (၅) ခကျြ…
အပျိုလေးတွေဖြစ်ရက်နဲ့ အိမ်ထောင်သည်ယောင်္ကျားကိုမှ စွဲလန်းကြရတဲ့အေကြာင်းရင်း (၅) ချက် ခုနောက်ပိုင်း အိမ်ထောင်ရေးပြဿနာ တော်တော်များများမှာ အပျိုလေးတွေက ဗီလိန်ဖြစ်နေတာကို အားလုံးလည်း တွေ့မြင်ရမှာပါ။ ဘာကြောင့် အပျိုတစ်ယောက်က ရုပ်ရည်လည်းရှိရက်သားနဲ့…. ပညာအရည်အချင်းလေးလည်း ရှိရဲ့သားနဲ့ အိမ်ထောင်သည် ယောက်ျားကိုမှ သိက္ခာအကျခံပြီး တွဲနေရလဲဆိုတာ အားလုံးသိချင်နေတဲ့ မေးခွန်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ဒီမေးခွန်းလေးတွေရဲ့အဖြေကိုတော့ အောက်မှာဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ (၁) ဖောက်ပြန်ချင်တဲ့ ယောက်ျားမှန်းသိနေလို့ မိန်းကလေးတစ်ယောက်ဟာ ယောက်ျားတစ်ယောက် ဖောက်ပြန်ချင်စိတ်ရှိနေတယ်ဆိုတာ အလိုလိုသိကြပါတယ်။ သူတို့ဖက်က ချစ်နေရင်တောင် ဒီတစ်ယောက်ျားတစ်ယောက်က ဖောက်ပြန်မယ့်သူမဟုတ်ဘူးဆိုရင် ရှေ့ဆက်တိုးလေ့ မရှိပါဘူး။ တကယ်လို့ အိမ်ထောင်သည်ယောက်ျားတစ်ယောက်က ဖောက်ပြန်ခဲ့တယ်ဆိုရင်တော့ သူကိုယ်တိုင်က ဖောက်ပြန်ချင်တဲ့စိတ်ရှိလို့ဆိုတာကို သိထားဖို့လိုပါတယ်။ (၂) ရင့်ကျက်တည်ငြိမ်လို့ အိမ်ထောင်သည်ယောက်ျားကိုမှ စွဲလန်းကြရတဲ့အကြောင်းရင်း (၅) ချက်အိမ်ထောင်သည်ယောက်ျားတွေက ဖြတ်သန်းလာတဲ့ဘဝအတွေ့အကြုံတွေအရ ပိုပြီးတည်ငြိမ်ကြသလို၊ ပိုပြီးတော့လည်း ရင့်ကျက်ကြပါတယ်။ မိသားစုကို … Read more
သငျ​ဟာ စနသေားသမီးနဲ့ ခဈြ​သူဖွဈ​​နပေီဆိုရငျ​ ဂုဏျ​ယူလိုကျ​ပါ​…
စနေ သားသမီး လေးတွေ အ‌ကြောင်း… စနေသားသမီး​တွေဟာ များ​သောအားဖြင့်​ စိတ်​သ​ဘောထား ပြည့်​ဝကြတယ်​ ။ စိတ်​ထား​ကောင်းကြတယ်​ …။ သင်​ဟာ စနေသားသမီးနဲ့ ချစ်​သူဖြစ်​​နေပီဆိုရင်​ ဂုဏ်​ယူလိုက်​ပါ​ ။ သူတို့ကိုလက်​လွှတ်​ ဆုံးရှုံးမခံပါနဲ့ …။ စနေသားသမီး​တွေက သူ့ရဲ့ချစ်​သူကို ​ပျော်​ရွှင်​​အောင်​ထားကြတယ်​ ။ သူ့ချစ်​သူကို စိတ်​ညစ်​​စေမယ့်​ အပြုအမူမျိုးကို လုပ်​​လေ့မရှိဘူး …။ တကယ်​လို့ သူ့ချစ်​သူက အ​ကြောင်း တစ်​ခုခု​ကြောင့်​ စိတ်​ညစ်​​နေရင်​လည်း ​ပျော်​ရွှင်​လာ​အောင်​လုပ်​​ပေးတတ်​ကြ ပါတယ်​ …။ ဒါကလည်းသူတို့ရဲ့ဗီဇလို့​ပြောရမှာ​ပေါ့ ။ စနေသားသမီး​တွေက နည်းနည်း​တော့ စိတ်​ကြီးကြတယ်​ …။ သူတို့ကို မဟုတ်​တာ​​ပြောရင်​ မကြိုက်​ကြဘူး ။ စတာပဲဖြစ်​ဖြစ်​ အတည်​​ပြောတာပဲြ​ဖစ်​ဖြစ်​ မကြိုက်​ကြပါဘူး …။ ဒါပေမယ့်​ စိတ်​တိုတဲ့အချိန်​ကလည်း နာရီဝက်​​တောင်​မကြာဘူး ။ … Read more
မိန်းကလေးတွေ မကြိုက်တဲ့ အမှန်တရား နည်းနည်းတော့ ခါးမယ် ဖတ်ကြည့်…
မိန်းကလေးတွေ မကြိုက်တဲ့ အမှန်တရား နည်းနည်းတော့ ခါးမယ် ဖတ်ကြည့်… ယောင်္ကျားတွေတော်တော်များများက အများပျော်အောင် Facebook မှာဖြစ်ဖြစ် အပြင်မှာ သူငယ်ချင်းဆုံရင်ဖြစ်ဖြစ် လုလုအောင်ဟေ့ !!! မအေးသောင်းဟေ့ !!!စသဖြင့် ရီစရာတွေရေးတင် ဟာသတွေလုပ်ပြီး Troll နေကြတာ… တကယ့်အပြင်လောကမှာတော့ လုလုအောင် မအေးသောင်း ဆိုရင် ဘယ်ကောင်မှ ဘာမှကို မခံစားရတာဗျ။ (တကယ်ပြောတာ ဘာမှကို မခံစားရပါ) ဒါ ကိုယ့်ဟာကိုယ် ဂုဏ်တင်ပြောနေတာ မဟုတ်ပါဘူး။ ယောက်ကျားအများစု ( အများစု )ရဲ့ ခံယူချက် စိတ်နေသဘောထားကို ပြောပြတာ။ ကျားသဘာဝ တို့ Men’s Behaviour တို့ ယောက်ကျားစရိုက်တို့ကြောင့်ဘဲဗျ။ ဝတ်မှုံရွှေရည် ဘယ်လိုလှလှ ၊ ခင်သန်းနုဘယ်လို လှခဲ့လှခဲ့ ၊ မို့မို့မြင့်အောင် ဘာဖြစ်ဖြစ် … Read more